7 चीजहरू तपाईलाई Google अब लन्चरको बारेमा थाहा हुनुपर्दछ | Androidsis
सत्य यो हो कि केहि चीजहरू को मामला मा बदलिएको छ Google Now लन्चर। हाम्रा धेरै पाठकहरूले सम्भवतः चिठीमा यी सबै परिवर्तनहरूको अनुसरण गरेका छन् र उनीहरूलाई थाँहा छ। यद्यपि, पक्कै पनि अरुहरू, विशेष गरी newbies, यस बिषयमा अलि बढी हराएका छन्। र केहि र अरुहरूको लागि, आज हामी तपाइँलाई यी परिवर्तनहरूको बारेमा केहि लेखका बारे ल्याउछौं जुन एन्ड्रोइड विश्‍वमा थोरै आउँदैछ र विशेष गरी यस प्रकार्यको बारेमा जुन यस सिद्धान्तमा केवल नेक्सस included समावेश गर्दछ, र त्यो पछि सम्भावना बन्न गयो। ओएसको कुनै टर्मिनलका लागि।
ती को लागी तपाईंले Google नाउ सुरुवातकर्ताको अवतरण हराउनुभएको छ गुगल प्ले अनुप्रयोगको रूपमा, र त्यसकारण बजारमा कुनै पनि उपयुक्त टर्मिनलका लागि उपलब्ध, हामी तपाईंलाई हाम्रो लेखको सम्झना गराउँदछौं जुनमा हामीले घोषणा गरेको हो आधिकारिक गुगल नाउ सुरुवातकर्ता सुरुवात। तर अब हामी ती वस्तुहरूलाई एक हेराई गर्न चाहन्छौं जुन आज उनको बारेमा वास्तविकता हो। त्यसोभए, के तपाईं यसमा भर्खर नयाँ हुनहुन्छ, वा यदि तपाईंलाई पहिले नै यो के हो बारे थाहा छ, तब हामी यसको पछाडिको सबै कुरा वर्णन गर्दछौं, र त्यो पक्कै पनि, विशेषज्ञको रूपमा पनि यसले तपाईंलाई चकित पार्न सक्छ। के तपाई उसलाई राम्ररी जान्न चाहानुहुन्छ?
गुगल नाउ लन्चर एन्ड्रोइड 4.1.१ र पछिल्लोसँग उपयुक्त छ, त्यसैले यदि तपाईंसँग भर्खरको एउटा मोबाइल टर्मिनल छ जुन अद्यावधिक गरिएको छ भने, तपाईं यसको फाइदा लिन सक्नुहुन्छ। अवश्य पनि, तपाईसँग गुगल खोजी अपडेट हुनु आवश्यक पर्दछ, किनकि यो ठीक आधिकारिक सुरुवातकर्ताको रूपमा कार्य गर्ने एक हो।
गुगल नाउ सुरुवातकर्ताले खास अनुकूलन गर्ने सम्भावना प्रदान गर्दैन। हामीसँग वास्तवमा Google Now को साथ आउँछ। जहाँसम्म, तपाईंसँग विभिन्न अनुमतिहरू छन् यदि तपाईंसँग रूट अनुमतिहरू छन्। तिनीहरूसँग तपाईं एक्सपोज र GEL सेटिंग्स मोड्युल लिन सक्नुहुनेछ सुरुवातकर्तालाई अलि बढी व्यक्तित्व दिन। अन्यथा, तपाईले मानकमा के आउँछ भनेर पुष्टि गर्नुपर्नेछ।
यदि तपाईं पृष्ठभूमि परिवर्तन गर्न वा विजेटहरू थप्न आवश्यक छ भने, तपाईंले यो प्रणाली प्रयोग गर्दा के गर्नु पर्दछ स्क्रीनमा कुनै खाली पोइन्ट थिच्नुहोस् र होल्ड गर्नुपर्दछ। यदि तपाइँसँग तपाइँको स्क्रीन कुराहरुले भरिएको छ भने, उत्तम कुरा तपाईले डेस्क र ती सबैको पहिलो प row्क्ति बीचको ठाउँ थिच्नुहोस्। त्यहाँ तपाईंलाई विरलै समस्याहरू हुन्छन्।
तपाईं म्यान्युअल रूपले नयाँ खाली होम स्क्रीनहरू थप्न सक्षम हुनुहुने छैन, तर निम्न पृष्ठहरू स्वत: सिर्जना हुनेछ जब सामान्य पृष्ठ बाहेक कुनै पृष्ठमा विजेट थप्दा। तर ती स्वत: रद्द हुनेछ यदि तपाईं यसमा उपलब्ध सबै हटाउनुहुन्छ भने। र यो सम्भवतः ती चीजहरू मध्ये एक हो जसले तपाईंलाई चकित तुल्यायो र तपाईंले कुनै विवरण भेट्टाउन सक्नुहुन्न।
तपाईले बाहिरी बाँयामा देख्न सक्नुहुने गुगल नाउ पृष्ठ हो। तपाईं यसलाई अर्को साइटमा सार्न सक्षम हुनुहुने छैन। तर कुनै पनि केसमा तपाईले सेवालाई सेटिंग्सबाट निस्क्रिय गर्न सक्नुहुनेछ परिणामका साथ।
तपाईं गुगल नाउ लन्चरमा नयाँ फोल्डरहरू सिर्जना गर्न सक्नुहुनेछ, तर घर वा डकमा मात्र। यो गर्नका लागि तपाईले भर्खर एउटा स्क्रिनमा माथी आईकन राख्नुपर्दछ, र त्यो तल उत्पन्न हुनेछ। त्यसोभए तपाईं यसलाई नयाँ नामको साथ निजीकृत गर्न सक्नुहुनेछ।
यस कस्टम ईन्टरफेसको साथ जुन पहिले केवल नेक्सस had थियो, Ok गुगलको भ्वाईस कमाण्डहरू सँधै गृह स्क्रिनमा सक्रिय हुन्छन्।
तपाईले त्यो सामान्य देख्नुहुन्छ Google Now लन्चर यो यसको विचित्रता छ। यसका पेशेवरहरू र विपक्षहरू, तर उनीहरूलाई यो जान्न सधैं राम्रो हुन्छ कि यो कसरी फैशनेबल भएको छ र यसका बारे थोरै विस्तृत जानकारी छ। आज हामी आशा गर्दछौं कि हामीले नौसिख पाठकहरूलाई मद्दत गरेका छौं, र सबैभन्दा विज्ञलाई केहि आश्चर्यजनकता दिएँ।
लेखको पूर्ण मार्ग: Androidsis » एन्ड्रोइड अनुप्रयोगहरू » Things चीजहरू तपाईलाई गुगल नाउ लन्चरको बारेमा जान्नुपर्दछ
एउटा क्वेरी, मेरो कम्प्युटरमा जेलीबीन छ (यो एक चिनियाँ एन्ड्रोइड POMP W89 हो), यसले गुगल खोजी अपडेट गर्‍यो, तर जब म स्थापना गर्छु यो सुरु हुँदैन, म स्टक लान्चर पाउँछु, यदि मैले सुरूवात विकल्प गरे पनि देखा पर्दैन। लन्चर सूचीमा, मलाई थाहा छैन म अरू के गर्न सक्दछ किनकि यो एकमात्र सुरुवातकर्ता हो जुन मेरो लागि काम गर्दैन, र नोभा लन्चरले Google लाई अहिले एकीकृत गर्दैन जुन म नियमित रूपमा प्रयोग गर्दछु।
नमस्कार क्रिस्टिना, धेरै राम्रो पोष्ट, जसले यसलाई बुझ्छन्, निश्चित रूपमा।
म गुगल अब सुरुवातकर्ता को बारे मा जान्नु पर्ने म अझ बढी चीजहरूको बारेमा सोच्न सक्छु।
- यो के हो? (डमीहरूको लागि)
- यो केको लागि हो? (डमीहरूको लागि)
र यो भन्न लायक हुनेछैन कि यो एप्लिकेसन लन्चर हो (एप्लिकेसन सुरुवातकर्ता के हो?), यो स्पेनिश प्रयोग गर्न लायक हुनेछ, त्यो स्प्यानिश कि हामी सबैले बुझ्दछौं (डम्मीहरूको), जसको लागि लेख्दा गर्नु हुँदैन सर्वसाधारण जनताले भने जस्तै चीजहरू भनिरहेका छन्: «यद्यपि तपाईंसँग विभिन्न अनुमतिहरू छन् भने तपाईंसँग रुट अनुमतिहरू छन्। तिनीहरूसँग तपाईं एक्सपोज र GEL सेटिंग्स मोड्युल लिन सक्नुहुनेछ सुरुवातकर्तालाई अलि बढी व्यक्तित्व दिन। अन्यथा, तपाईले मानकमा के आउँछ भनेर पुष्टि गर्नुपर्नेछ। »
जे होस्, पहिले धन्यवाद, सबैलाई कला को प्रेम को लागी अरूलाई सूचित गर्न कोहि परवाह गर्दैन।
मैले भनें धेरै धेरै धन्यबाद।
मलाई सीटी दिनुहोस्: एक सिस्टलको साथ तपाईंको एन्ड्रोइड फेला पार्न एउटा अनुप्रयोग